Prasta Khabar-बन्लान् त बानियाँ प्रतिपक्ष दलको नेता ?
बन्लान् त बानियाँ प्रतिपक्ष दलको नेता ?
२३ पुस, हेटौँडा । प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिएको एक महिना वितेपनि अझै प्रदेश सरकार गठन हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन नभए पनि दलहरु अब बन्ने प्रदेश सरकारबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक र सरकार गठन अन्यौलमा रहँदा नेपाली कांग्रेसले प्रदेशमा आफ्नो प्रतिनिधित्वबारे छलफल गरिरहेको छ । पहिलो दल हुन नसकेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्ने तर्खरमा छ । तर सत्ता गठबन्धनबारे टुंगो नलाग्दा यसमा ढिलाई भएको जनाईएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारी गरे नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्ने निश्चित छ ।
त्यसैले कांग्रेसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा शिर्ष नेताहरुबीच छलफल तिब्र पारिएको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा पनि यसबारेमा छलफल भईरहेको नेपाली कांग्रेस स्रोतले बतायो । प्रदेश नम्बर ३ मा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट ७ जना विजयी भएका छन् । विजयी नेतामध्ये नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति समेत रहेका पूर्व गृहराज्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बन्ने चर्चा छ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिन लागेका बानियाँलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ३ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार गठन गरे मूख्य मन्त्री, नभए प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बनाउने बचन दिएका थिए । उनले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ छोड्न भन्दै मूख्य मन्त्री वा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बनाउने बचत दिएको कांग्रेस मकवानपुरका नेताहरुको भनाई छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाको निर्देशनपछि बानियाँ मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ को प्र्रदेश २ बाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए ।
‘आफ्नो वचन पुरा गर्न पनि सभापति देउवाले बानियाँलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बनाउनुपर्नेमा कांग्रेस मकवानपुरका नेताहरुको एक स्वर छ । बानियाँलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बनाउनुपर्नेमा ३ नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कांग्रेस नेताहरुले नै देउवासमक्ष लविङ गरिरहेका छन् । बानियाँ निकट स्रोतका अनुसार देउवा पनि उनीहरुको भनाईमा सकारात्मक देखिएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री र गृहमन्त्री चलाईसकेको, कांग्रेसलाई मकवानपुरमा २ वटा निर्वाचनमा विजयी गराएको र पार्टी जिल्ला सभापति समेत रहेकाले उनलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बनाउनुपर्ने कांग्रेस मकवानपुरको ठम्याई छ । यसका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म लविङ भईरहेको जनाईन्छ ।